Sida loola wadaago goobtaada safarka Khariidadaha Google | Androidsis
Khariidadaha Google ayaa ah codsi gudbinta heer sare ah oo ku saabsan Android. Isticmaalayaal badan ayaa adeegsada markay safar galayaan. Wax aad u raaxo leh, oo ay ugu wacan tahay shaqooyinka ku jira sida soo sheegaan radaarka ama shilalka, taas oo noo ogolaaneysa inaan marwalba ka warqabno waxa ka socda wadada. Waxaa macquul ah inaad safar gasho si aad u booqato qof, waxaadna rabtaa inuu qofkaasi ogaado meeshaad horayba ugu sii socotay wadadaas. Tani waa wax la qaban karo.
Sababta oo ah khariidadaha Google waxaan ka helnaa suurtagalnimada in lala wadaago goobtayadamarka lagu daro goobaha wadaag isticmaalayaasha kale. Laakiin sidan, qof kale ama koox dad ah ayaa garan kara halka aan safarkayaga ku jirno. Way fududahay in la isticmaalo shaqadan.
Tani waa shaqo sidoo kale noo oggolaaneysa inaan la wadaagno goobta la yiraahdo xilligaas, si aan u ogaano sida ugu sarreysa safarkayaga, innaga oo aan ka tegin habka hagidda Waa wax shaki la'aan u oggolaanaya hawlgal runtii raaxo leh dadka isticmaala. Shaqadan oo ku jirta Khariidadaha Google, waan awood u la wadaagto meeshan shabakadaha bulshada ama codsiyada farriimaha si fudud.
Sidaa darteed, waxaad si fudud ugu qasban tahay raac laba talaabo oo ku saabsan barnaamijka ku saabsan Android. Wax dhibaato ah kuma lahaan doontid isticmaalkeeda. Kaliya raac talaabooyinka hoos ka muuqda:
La wadaag goobta Khariidadaha Google
Marka hore waa inaan Ku bilow marinka arjiga. Sidaa darteed, waa inaan galno meesha aan dooneyno ee Khariidadaha Google oo aan bilowno inaan u dhaqaaqno dhankaas. Waxay noqon kartaa lug, ama gaari ahaan macnahaas. Laakiin waa inaan ku jirnaa qaabkan hagista ee dalabka, si aan u awoodno inaan adeegsanno shaqadan gaarka ah. Marka haggu bilaabmo, waxaan eegeynaa shaashadda hoosteeda.
Tan iyo halkaas waxaan ka heli dhowr icons la heli karo. Midigta, waxaan ka helnaa astaanta falaarta korkeeda, taas oo aan ku riixeyno daqiiqadaas. Waxaa jira kiisas oo astaantu aysan muuqan karin, ka dibna riix shaashadda, si astaamahan ay mar kale u soo baxaan. Markii aan gujino xulashadan, taxane ikhtiyaarro cusub ah ayaa ka soo muuqan doona hoosta qaabka menu. Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan aragno taas Xulashada ugu horeysa ee ka soo baxeysa liiskan waxaa loogu yeeraa dheh halkaad u socoto. Tani waa shaqada na xiisaynaysa xilligan. Maaddaama ay tahay muuqaalka Khariidadaha Google ayaa noo oggolaan doona inaan la wadaagno goobtan waqtigaas saaxiibbadeen. Sidaa darteed waan ku dhajineynaa.
Markii aan riixnay doorashadan, waxaan arki doonnaa in menu yar uu ka furmo qeybta hoose ee shaashadda. Dhexdeeda waxaan ku leenahay xulashooyin aan ku dooran karno habka ay tahay waxaan rabnaa inaan wadaagno bartan halka aan jogno. Waan ku sharxi karnaa isticmaalka barnaamijyada farriimaha, sida ku cad kiiskaas. Dareenkan, isticmaale kasta waa inuu doortaa ikhtiyaarka ay u arkeen inuu ugu habboon yahay inuu la wadaago. Waxaan sidoo kale arki karnaa in xiriirada ay si toos ah u soo baxayaan, oo wata lambarka taleefankooda. Sikastaba xaalku ha ahaadee, dooro waxa adiga kuugu fiican.
Haddii aan ku sharadno barnaamijka farriinta, markii aan xulanno barnaamijka, waa inaan doorannaa xiriirka ama wadahadalka aan ugu dirayno goobtan. Khariidadaha Google ayaa abuuri doona xiriiriye, si qofka sheekada la sheegay uu ku riixo. Kadib barnaamijka khariidadaha ayaa ka furmaya shaashaddaada, si aad u aragto goobta. Tani waxay u oggolaaneysaa qofkaasi inuu tago inaad awoodo inaad ku aragto waqtiga dhabta ah goobta aad joogto. Aad u fududahay in la isticmaalo taasina runtii waxtar ayey u yeelan kartaa dadka isticmaala Android. Weligaa ma isticmaashay muuqaalkan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loola wadaago booskaaga safarka Khariidadaha Google